Shinjuku Station (13th Nov)
Our victory is not far off! 🕊🕊
13th of November , TTAJ did pamphlet and pocket sharing activity at Shinjuku Station. RTM collaborated with us this week activity for fund raising in order to support areas needed for help in Myanmar.
We were able to hand out over 450 pamphlets and 400 pocket tissues from 11:00am till 2:00 pm.
We would like to express our deepest gratitude to Camera Men, Water/Snacks Donors and especially to our beloved volunteers who came to support us weekly.
"ငါတို့အောင်ပွဲ မဝေးတော့ပြီ " 🕊🕊
ယမန်နေ့ ၁၁ လပိုင်း ၁၃ ရက်နေ့မှာ TTAJ အဖွဲ့အနေနှင့် Pamphlets / Pocket Tissue ဝေတဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို Shinjuku ဘူတာမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ။
ယခုတစ်ပတ် TTAJ အဖွဲ့၏ လှုပ်ရှားမှုတွင် Revolution Tokyo Myanmar - R.T.M အဖွဲ့မှ အတူတကွ လာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွက် လိုအပ်တဲ့နေရာများတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် အလှူငွေကောက်ခံခြင်းလှုပ်ရှားမှုကိုပါ ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။
နေ့လည် ၁၁ နာရီမှ ၂ နာရီ အတွင်းလက်ကမ်းစာစောင်ပေါင်း ၄၅၀ ကျော်၊ တစ်ရှူး အခုရေ ၄၀၀ ကျော်ကို ဂျပန်ပြည်သူ/သားတွေ လက်ဝယ်အရောက် ဝေငှပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အပတ်စဉ်တိုင်း လာရောက်အားဖြည့်ပေးပါသော ဓာတ်ပုံ/ဗီဒီယို မှတ်တမ်း ရိုက်ကူးပေးပါသော Camera သမားများ၊ Volunteers များအတွက် ရေဘူးနှင့်မုန့်များ လှူဒါန်းပေးပါသောအလှူရှင်များ ၊ TTAJ's Volunteers များအားလုံးကို အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် ။